Vaovao - Ny marina momba ny latabatra kafe ary ny antony ilainao ilana iray
Manontany foana izahay, ary ny iray amin'ireo fahita matetika dia ny hoe mila latabatra kafe ve ianao. Anontanio izay mpamorona ao anatiny fa holazain'izy ireo aminao, miendrika trompetra amin'ny tranga rehetra. Maninona no mamorona efitrano tsara tarehy raha tsy ampiasainao mihitsy? Izany no antony maha-zava-dehibe ny fametrahana ny fomba hampiasanao habaka alohan'ny hanombohanao miantsena. Ho an'ny efitrano fandraisam-bahininao dia mety ho mijery televiziona ianao, mampiantrano namana, ary miala sasatra miaraka amin'ny ankohonanao. Efitra natao hampahazo aina azy.
Ampidiro ny latabatra kafe. Aorian'ny fipetrahanao dia io no sombin-javatra lehibe indrindra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininao satria mitazona zava-pisotro, ny lavitra anao, ny fitaovana famakiana ary toerana hametrahana ny tongotrao izy io. Mila efitrano fandraisam-bahiny rehetra ny trano fandraisam-bahiny rehetra, ary eto izahay hitety anao amin'izay tokony hoheverinao alohan'ny hisafidianana iray.
1. Haben'ny latabatra kafe
Ny latabatra kafe misy anao dia tokony ho eo anelanelan'ny 14-18 santimetatra avy amin'ny toerana mipetaka manodidina azy, ary azo antoka fa tsy mihoatra ny 24 santimetatra. Ka raha nametraka ny planina nataonao ianao dia tokony ho hitanao ny haben'ny latabatra kafe ilainao.
Ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny tena lehibe dia diniho ny fampiasana latabatra kafe roa mifanila. Na raha tsy mandalo ny efitranonao dia afaka mihalehibe kokoa aza ianao.
2. Diniho ny endrika
Ny habaka sy ny fisehanana samihafa dia mitaky endrika samihafa, saingy ity misy zavatra tokony hosaintsainina. Ho an'ny layout izay mihidy kokoa, ny kianja na ny mahitsizoro dia miasa tanteraka.
Raha mandalo ny efitrano fandraisam-bahininao, ary mandeha manodidina ny latabatra kafe ianao, dia mandeha tsara.
Raha tiana holazaina dia tianay ny mandanjalanja ny endrika boribory sy toradroa amin'ny habaka iray, noho izany raha toa ka efa-joro ny ankamaroan'ny kojakoja fanakao (eritrereto ny seza misy sandry tuxedo, fatana efa-joro ary latabatra lafiny toradroa), misy latabatra kafe boribory manampy mandanjalanja. Raha tsy izany, raha manana sandry miolakolaka amin'ny fanakao ianao, fitaratra boribory lehibe, ary latabatra sisiny boribory, dia miasa tsara ny latabatra lafiny iray na ny mahitsizoro. Momba ny fandanjalanjana daholo izany.
3. Vitao ny efitrano
Tsy tokony hisy toerana hampiasana ny famaranana mitovy amin'ny faritra rehetra, koa toy ny endrika, ny latabatra kafe dia mety ho fomba iray hitondra zava-baovao ao amin'ny habakabakao. Raha manana lamba nubby eo amin'ny farafaranao ianao na singa ambonimbony kokoa, ny latabatra kafe manjelanjelatra na mamirapiratra dia hampifanohitra an'io firafitra henjana io. Na raha hampiasa ny efitrano fandraisam-bahininao ianao hijerena fahitalavitra, misafidiana famaranana izay tsy mampaninona anao ny mametraka ny tongotrao, toy ny hazo somary misavoana na ny ottoman-tampona.
4. Fanaingoana ny latabatra kafe
Raha vantany vao nisafidy ny latabatra kafe ianao dia mandiniha fitaovana. Ho an'ny efitranom-pianakavianao hijerena fahitalavitra dia mety te-hamela toerana malalaka hikarakarana tongotra ianao ary hametrahana zava-pisotro. Ny latabatra kafe misy talantalana ambany dia miasa ao amin'ireo habaka ireo satria afaka mametraka boky sy fitoeran-tsakafo eo ambaniny ianao, ary mamela toerana malalaka eo amboniny.
Ataovy ambany foana ny kojakoja rehetra, satria te hahita ny ambonin'izy ireo ianao. Izay avo loatra dia hanakana ny tsipika fahitanao.
Manampia ilaina: azo aseho ireo fitaovana famakiana, boatin-tseza, morontsiraka, boaty ho an'ny lavitra, labozia, afokasoka, na zavatra hafa ampiasainao matetika.
5. Ottomans sy Clusters
Ankehitriny, tsy ny efitrano fandraisam-bahiny rehetra dia mila manana "latabatra kafe" - amin'ny teny hafa, afaka mampiasa ottoman, pouf, na cluster misy latabatra kely kokoa ianao amin'ny tranga sasany. Ny zava-dehibe dia ny fanananao zavatra amin'ity habaka ity ho an'ny asa - latabatra ottomanina, latabatra roa na telo miaraka amina latabatra, na latabatra avo kokoa amin'ny halavan'ny cocktail dia mety miankina amin'ny fomba hampiasanao ny faritra ipetrahanao.
6. Latabatra sy fizarana kafe
Raha manana fizarana ianao dia azonao atao ny manatona ny latabatra kafe misy anao amin'ny fomba hafa. Fizarana maro no manana chaise amin'ny lafiny iray na roa, ka mety tsy hametraka ny tongotrao eo ambonin'ny latabatra kafe ianao. Manome anao fotoana bebe kokoa hampiasa latabatra fitaratra na vy ity. Azonao atao ihany koa ny mandeha kely kokoa eto satria tsy dia hivezivezy intsony izy ireo ary tsy hampiala voly.